Iifonti zesans-serif ezaziwa kakhulu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iifonti ezaziwa kakhulu ngaphandle kwe-serif
UManuel Ramirez | | Imithombo
Imithombo yolwazi I-Sans Serif zezo sizibonileyo kwiimovie ezininzi Kwaye neempawu ezinkulu ziyayisebenzisa. Ayisiyiyo le kuphela, kodwa lusapho olugqwesileyo ukuhlala kwezi ziqendu zinkulu siza kuthi sizibone kwiscreen seselfowuni okanye iPC.
Yiyo loo nto sikubonisa eyona fonti ingekho serif, inkcazo yokuba kutheni ibizwa njalo okanye nemvelaphi yegama lakhe. Siza kuyazi loo mithombo, njengeFutura, ekwaziyo ukubonwa naseNyangeni xa iNASA yayisebenzisa ngomhla wayo. Ziphose kuyo.
1 Yintoni uhlobo lweSans Serif
1.1 Amaqela ayo amane amakhulu
2 Ihambisa ntoni i-Sans Serif typeface?
3 Ezona fonti zingcono zeSans Serif
3.2 Bureau Grotesk
3.3 Intsimbi gothic
3.4 I-PT SANS Pro
3.7 Ngaphandle kweDroid
3.12 Luxi engenazo
3.13 IHelvetica Neue
3.14 Lucida sans
3.16 Iindaba zeGothic
3.17 Iprojekti yamaMiriyadi
Yintoni uhlobo lweSans Serif
Ukuba siya kwi-wikipedia sinokufumanisa ukuba uhlobo lwe-sans serif typeface Yileta engenababalo okanye ileta eyomileyo. Oko kukuthi, umlinganiswa ngamnye akanazo izinto ezincinci ezibizwa ngokuba ziiserif okanye iiserif; zithini izihombiso ezibekwe ngesiqhelo eziphelweni zemigca yabalinganiswa.
Olu hlobo lochwethezo ngokubanzi lunokusetyenziselwa iintloko kunye ukunqongophala kwezi serif okanye iiserifUkuyijonga ngokwembono yomfundi, inyanzela amehlo ethu ukuba axineke ngakumbi xa kufuneka sifunde iibhloko ezinkulu zombhalo.
Kodwa ke, ukuba siya kwidijithali kwaye sifunda kwizikrini, ezinje ngezixhobo zethu eziphathwayo, iitafile okanye abafundi, ngenxa yepikseli kufezekisiwe ukuba i-sans serif ijonge icace gca kwaye icoceke ngakumbi kunamagama anezo serifs okanye iiserif. Ke ukuba ujonga ifonti efanelekileyo yokufunda kwifowuni, njengamaphepha okufika okanye iibhloko, i-sans serif ingaphezulu kweebhloko ezinkulu zombhalo.
Phakathi kwemithombo ezona sans zidumileyo sinokuzifumana IHelvetica, iAvant Garde, iArial kunye neGeneva. Iifonti zeSerif zibandakanya amaXesha amaRoma, iCourier, iNcwadi yeSikolo yeNkulungwane eNtsha, kunye nePataino.
Amaqela ayo amane amakhulu
Sinayo amaqela amane aphambili kwisans serif:
EyothusayoIifonti ezothusayo zinomda wobubanzi obulinganiselweyo. Iziphelo kumagophe ubukhulu becala zithe tyaba kwaye zine "G" kunye ne "R" ekhuthazwe "ngomlenze ojijekileyo". Eminye yemizekelo eyoyikisayo yile: Venus, News Gothic, Franklin Gothic, neMonotype Grotesque.
Neo-ezoyikisayo: sijamelene nokuvela ngokuthe ngqo kweentlobo ezothusayo. Babonakaliswa ngoonobumba abakhulu abanobubanzi obufanayo. Olunye uyilo lwangoku lwe-sans serif.
Ijiyometri: Ngokusekwe kwiimilo zejiyometri kwaye usondele kakhulu kwizangqa ezigqibeleleyo kunye neigridi. Iimpawu zabo eziqhelekileyo ngoonobumba abakhulu "O" kunye "nebali elinye" kumatyala asezantsi "a." Kwezi ndidi zine, zejometri zihlala zisetyenziselwa umzimba kancinci kwaye ngakumbi izihloko okanye iindinyana ezincinci zesicatshulwa.
Ubuntu: Baphefumlelwe lolona hlobo lwefomathi yesiko. Uyilo lobuntu luyahluka ngaphezulu kweGothic okanye ijiyometri. Olunye uyilo luya kuba ngaphezulu kwejiyometri njengakwiGill Sans.
Ihambisa ntoni i-Sans Serif typeface?
Ixesha sans livela kwigama lesiFrentshi "sans", Oko kukuthi "ngaphandle." Ngelixa "i-serif" imvelaphi yayo ingaziwa. Kuthiwa inokuba isuka kwigama lesiDatshi "schreef" kwaye lithetha "umgca" okanye ukubetha kwepensile.
Isans serif luhlobo lohlobo olo iye yaziwa kakhulu ngokubonisa isicatshulwa kwizikrini zekhompyuter. Kwizigqibo ezisezantsi, ezo nkcukacha zilahlekile. Kwaye kukho ezinye zeefonti ezisetyenziswa ngokubanzi ziimpawu ezaziwayo. Sithetha ngeFutura kunye neempawu ezifana noCalvin Klein, uLouis Vuitton, uVolkswagen, IKEA, uRedbull nabanye abaninzi ...
Singayifumana nakwininzi yeemovie ezinje I-Space Odyssey, Ubuhle baseMelika okanye iNethiwekhi yeNtlalontle. I-Futura yindawo yamandla amakhulu kwaye isekwe kwijometri. Sithetha nge-Futura njengefonti eyayisetyenziswa yi-NASA kwipleyiti yesikhumbuzo eyabekwa eNyangeni ngo-1969. Ke kule meko yenye yeefonti eziphawula imbali.
Ezona fonti zingcono zeSans Serif
Ukugqiba siza kukunika uluhlu olukhulu lweefonti zeSans Serif kwaye oko kuya kukunceda ukuba unike olo thintelo lobuhle kunye nokufundeka kwiwebhusayithi yakho, ibhlog, i-ecommerce okanye iphepha lokufika. Masihambe nabo.
Umthombo ukuphucula izicatshulwa ukuze zivulwe kwaye umfundi usondele kufundo lwakho.
Inkqubo ephucukileyo ye-sans serif ebonelela ezahlukeneyo zabalinganiswa enomtsalane. Eyilwe ngo-1989-2006 ngabadali abahlukeneyo.
Layisha: Bureau Grotesk
Siya ngaphambi kweserif elula kakhulu Kwaye yayilwa ngelo xesha ngeenkcukacha zomnxeba. Iphawuleka ngezithuba zayo zesisa phakathi kwabalinganiswa.
Layisha: Intsimbi gothic
I-PT SANS Pro
Omnye ifonti elula yale mihla enokusetyenziselwa izisombululo ezahlukeneyo. Unayo kwizisindo ezi-6 ezahlukeneyo. Eyilwe ngo-2010 ngu-Alexandra Korolkova, u-Olga Olempeva noVladimir Yefimov.
Layisha: I-PT SANS Pro
Enye ifonti kaGoogle Wazalelwa kwi-Academy yoBugcisa boBugcisa e-Urbino njengeprojekthi ye-didactic. Umthombo ozalwa ngumsebenzi wentsebenziswano wabafundi abahlukeneyo unyaka nonyaka ukuyiphucula.
Ifonti kaGoogle eyilelweyo njengeprojekthi yokuthweswa isidanga kwiYunivesithi yokuFunda. Iserif yangoku kunye neyobuntu eyilelwe kugxilwe ekufundeni kwescreen. Izixhobo ezisezantsi ze-Android, ke kwizinto ezithile ...
Iifom ezintle, ze ulwamkelo olulula kwaye singazisebenzisa zombini kwiwebhu njengokuprinta, ubugcisa kunye nezorhwebo. Iserif eguquguqukayo kakhulu engenanto ibalulekile kwikhathalogu yakho yefonti.
Khuphela: iBebas Neue
Enye yeefonti ezinobuhlobo ezenziwe ngemiqondiso kunye nokunikezela ngomgangatho ophezulu embonisweni. Yayilwa nguSteve Matteson ngo-2009.
Layisha: Ngaphandle kweDroid
I-sans serif esinakho fumana simahla njengefonti kaGoogle Kwaye yayilwa phakathi kuka-2010 no-2011. Ihleli ngaphakathi kwenkqubo yokusebenza, kodwa inokunikwa okunye ukusetyenziswa.
Umthomboe inokubonakaliswa ngobuhle bayo, Yiba yijometri kunye nokukhanya kwelanga. Ubungangamsha kwenye into eyaziwayo ngaphandle kweserif.
Omnye sans serif enokuma ngokucacileyo kwaye ucoceke ngokwaneleyo ukuba ungayisa kwiifomathi ezahlukeneyo.
Omnye kwiifonti zikaGoogle kwaye ayinakuphoswa nangayiphi na indlela. Uhlobo oluhle kakhulu lokuchwetheza ukuba enye yeenjongo zalo kukuba kwiintloko kunye nezinye iintlobo zabalinganiswa abakhulu. Inomxholo wodade ogama linguRaleway Dots. Ukuqwalaselwa kweentlobo ezahlukeneyo zobunzima.
Ifonti efanayo kaLucida yayiyilwe kwasekuqaleni kwiX Windows System. Isasazwe kwiinkqubo ezisebenza njengeLinux.
Layisha: Luxi engenazo
Omnye ifonti ngoncedo lobuchule kwaye yenye yezona zisetyenziswa kakhulu. Akukho namnye odumileyo olahlekileyo kwaye engayibeki iHelvetica Neue iya kuba sisono. Ukuba ungathetha ngezona zisombululo zakho zibalaseleyo, sinokuthetha ngokubulela kwintengiso ekucaceni nasekufundeni ngokudibeneyo kumthombo omnye.
Layisha: IHelvetica Neue
Iphawulelwe umgangatho wayo ophezulu kunye nobuhle obuza kunxitywa ngamashishini ahlukeneyo. Eyilwe nguCharles Bigelow noChris Holmes ngo-1986.
Layisha: Lucida sans
Enye ifonti entle kakhulu engashiyi mntu engenankathalo. Unobunzima bamagama angama-28 Kwaye yayilwa ngo-2003 ngu-Erik Spiekermann. Ifonti yanamhlanje yenye yezona zinto zintsha kolu luhlu lukhulu lweefonti ze-sans serif.
Omnye yeefonti zodidi lwesans serif. Yayilwa ngo-1970 nguHerb Lubalin noTom Carnase. Ikwabonakaliswa bubuninzi bamatye kunye nokusebenza kwayo xa isetyenziswa kwizisombululo ezahlukeneyo.
Layisha: Igadi efanelekileyo
Ngokubanzi isetyenziselwa zonke iintlobo zeefomathi kwemibhalo efana namaphephandaba, iimagazini kunye nezinye iintlobo zosasazo. Idalwe nguMorris Fuller Benton we-ATF ngeendlela ezahlukeneyo zokulinganisa. Ifonti entle kakhulu.
Layisha: Iindaba zeGothic
Omnye iifonti ezidumileyo kolu luhlu Kwaye isetyenziswe ngokubanzi kwimiboniso kunye neetekisi kulwakhiwo lweFotohop. Yaziswa yiAdobe uqobo ngo-1992 kwaye sinokuyifumana kwiifomathi ezahlukeneyo.
Layisha: Iprojekti yamaMiriyadi
Umthombo intle kakhulu kwaye ibambe amehlo ezinokusetyenziselwa imiqondiso, amagama eshishini kunye nezinye iintlobo zamabango. Eyilwe nguHermann Zapf ngo-1958, ibikunye nathi ixesha elithile.
Umthombo ungazisebenzisela iibhlog zakho zobuqu ngokubhekisele kwimicimbi yequmrhu neyeshishini. Eyilwe ngu-Eric Gill ngo-1928 kwaye ineentlobo ngeentlobo zobunzima bokuyisebenzisa kunye neempawu zayo.
Layisha: Gill sans
La Ukulula yenye yezona zinto zibalaseleyo Olu hlobo lochwethezi olwenziwe ngo-1988 ngu-Adrian Frutiger. Enye yeenjongo zakhe yayikukumkhokelela kuzo zonke iintlobo zezisombululo zekamva.
Omnye enhle ngaphandle kweserif eneenkcukacha ezininzi ngezo ndawo apho kufuneka sizihlule. Eyilwe yiPanos Vassiliou ngo-2002 kwaye ibonakaliswe ngoluhlu olubanzi lobunzima.
Eyilwe Ngo-1927 nguPaul Renner Okwangoku kungoku kwaye iintlobo ngeentlobo zobunzima ziyakuvumela ukuba zithwalwe ngazo zonke iintlobo zeefomathi. Enye yeeklasiki ezingalahlekiyo nakweyiphi na ikhathalogu.
Omnye we iifonti ezinobuhlobo enophawu lokujonga okuhle kwiscreen sefowuni. Ukuqwalaselwa kukwahluka kakhulu kobunzima oza kudlala nabo.
Omnye kwimithombo yakudala, kodwa ibe yenye yezona zisetyenziswayo ukusukela oko yaqala ukubonakala ngo-1950. Yaziswa ngelo xesha ngegama likaNeue Haas Grotesk ukuba kuthiwe yiHelvetica.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iifonti ezaziwa kakhulu ngaphandle kwe-serif
Ezo ayizizo iifonti ze-sans serif ... ZIINTLOBO ZE-SANS
Ifonti yasimahla ye-IKEA lolona hlobo luhle kakhulu lokubhala olwenziweyo
UNowa yifonti engenazinto ongenakuphulukana nayo